चिनियाँ सेनासँग नेपालले पृथक ढंगले टाइअप गर्न खोज्या होइनः रक्षामन्त्री पोखरेल (अन्तर्वार्ता) - अन्तर्वार्ता - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
बेइजिङ कार्तिक ११
चीनको भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र चिनियाँ राज्यपरिषद सदस्य एवं रक्षामन्त्री वै फङहबीच शनिबार बेइजिङमा भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्तासँगै नेपालको विपद् व्यवस्थापन परिचालनका लागि चीनले १५० मिलियन चिनियाँ युआन (करिब दुई अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ) सहायता दिने सम्झौतामा भएको छ। नेपाली सेना र चिनियाँ सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्याससँगै पछिल्ला केही वर्षयता सम्बन्ध कसिँदै गएको चर्चा भइरहेको छ। यही सन्दर्भमा चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग बेइजिङमा नेपालखबरले गरेको वार्ताः
बेइजिङमा भएको स्याङशान मञ्चमा नेपालको तर्फबाट के विषय उठाउनु भयो?
बेइजिङ स्याङशान मञ्चको यो आठौं संस्करण हो। यहाँसम्म आइपुग्दा यसले धेरै कोर्सहरू पूरा गरेको छ। यसपटकको फोरममा विभिन्न विषयहरू राखिएका थिए। यसमा नेपालले खासगरी विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि ‘पिस किपिङ फोर्स’ बारे हाम्रो योगदान केर रह्यो, चुनौतीहरू के छन् र तिनको सामना गर्नका लागि कस्तो दृष्टिकोण लिनुपर्छ भनेर राष्ट्रसंघ लगायत सम्बद्ध सबै राष्ट्रहरू समक्ष सुझाव तथा विचारहरू राखेका छौं। त्यस मानेमा ८–१० वटा विषयहरू रहेको यस फोरममा विभिन्न देशका रक्षामन्त्रीहरू र केही देशका उपप्रधानमन्त्री समेत बसेर छलफल गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने काम भयो। यस हिसाबले यो महत्वपूर्ण रह्यो।
नेपालका लागि चाहिं कुन हिसावले महत्वपूर्ण रह्यो?
हामीले हाम्रा कुराहरू राख्यौं। विगत ६० वर्षदेखि यो यूएन पिस किपिङमा हाम्रो संलग्नता छ। हामीले जुन ढंगले भूमिका खेल्दै आएका छौं, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हामीले राख्न पायौं। र, अरूका कुरा पनि हामीले सुन्न पायौं, त्यस हिसाबले राम्रो भयो। दोश्रो कुरा, विभिन्न विषयमा खासगरी आतंकवाद विरूद्ध लड्नका लागि कसरी शान्तिका पक्षधर मुलुकहरूले आफ्नो देशको शासन व्यवस्थालाई त्यस अनुकूल बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आएका छन्। त्यसकारणले अरू देशका प्रस्तुतीहरू हामीले पनि सिक्नका लागि उपयोगी भएको छ।
पछिल्ला दिनहरूमा चीन–नेपाल सैन्य सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै आएको हो?
यो चीन र नेपालको मात्रै कुरा होइन। हामीहरू द्वीपक्षीय ढंगले सैनिक तालिमहरू आदानप्रदान गर्ने गर्दछौं। संयुक्त अभ्यासहरू नेपाल र भारतबीच पनि छ, नेपाल र पाकिस्तानबीच पनि छ। नेपाल–बंगलादेश, नेपाल–बेलायत, नेपाल–अमेरिका लगायतसँग सैन्य अभ्यास छ, त्यस्तै चीनसँग पनि छ। त्यसैले नेपाल–चीन सैन्य सम्बन्ध पृथक ढंगले, नयाँ ढंगले वा अन्यथा रूपले अगाडि बढाउन खोजेको होइन। हामीले स्वतन्त्र, सार्वभौम मुलुकको हैसियतले आफुलाई लाभ पुग्ने हिसाबले विभिन्न मुलुकहरूसित द्वीपक्षीय सम्बन्ध बढाइरहेका छौं। त्यसैको सिलसिलामा चीनसित पनि हो।
चीनसित नेपालको सैन्य सम्बन्धको कुरा गर्दा सन् १९८८ देखि औपचारिक ढंगले गतिविधिहरू प्रारम्भ भएको देखिन्छ। त्यसपछि निरन्तर छ र खासगरी चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका अधिकारीहरू जंगल वारफेयर माउन्टेन तालिमका लागि नेपालमा जान्छन्। त्यस्तै नेपाली अधिकारीहरू पनि चीनमा आउँछन्। यो पारस्परिक समझदारीका रूपमा हुँदै आएको हो।
चीनले नेपाललाई सैन्य सहायता किन बढाउन खोजेको?
चीनका रक्षामन्त्रीसँग औपचारिक भेटवार्तापछि शनिबार यससम्बन्धी एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। यो सम्झौतामा चीनले नेपाललाई विपद् व्यवस्थापन परिचालनका लागि १५० मिलियन चिनियाँ युआन सहयोग दिने भन्ने छ। यो सहयोग चीनले गर्दै आएको सहयोगकै निरन्तरता हो। अझै उन्नत ढंगले सहयोग गर्ने योजना छ।
सहयोगको उद्देश्य के हो?
नेपाली सेनाको क्षमतावृद्धि गर्ने र आत्मनिर्रभर बनाउने कुरा छ। त्यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ।
त्यसबाहेक अरू सहयोगका कुरा छन्?
नेपाली सेना र अरु देशका सेनाबीच जस्तो सम्बन्ध छ, चिनियाँ सेनासँगको सम्बन्ध पनि त्यस्तै हो। त्यही सिलसिला हो। चिनियाँ सेनासँग कुनै पृथक ढंगले ‘टाइअप’ गर्न खोज्या होइन। (त्यस्तो) हामी चाहन्नौं पनि। हामी देशको राष्ट्रिय स्वार्थ, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता ख्याल गरेर कुनै पनि देशसँग द्वीपक्षीय सम्बन्ध बढाउन चाहन्छौं। त्यही सम्बन्ध चीनसँग पनि हो।
नेपाली सेनाले चाहिं चिनियाँ सेनालाई के सहयोग गर्नसक्छ?
सहयोग भनेको भौतिक आदानप्रदान मात्रै हैन। नेपाली सेनासँग धेरै समृद्ध अनुभवहरू छन्, जुन अरु देशका सेनासँग आदानप्रदान गर्न सकिन्छ। नेपाली सेना भनेको मुलुकको एकीकरण, राष्ट्रियता स्वाधीनता, स्वतन्त्रतासित गाँसिएको महत्वपूर्ण संस्था हो। शान्ति स्थापनामा संलग्नताको ६० वर्षदेखिको लगातारको अनुभव छ। त्यो आदानप्रदान गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित ११ कार्तिक २०७५, आइतबार | 2018-10-28 11:04:05